OoVimba baseTshayina-Funda ukuRhweba
I-China Crypto Ban: Amashishini angama-20 ahambelana ne-Crypto okufudukela kwelinye ilizwe
Ngokwengxelo zamva nje, ngaphezulu kwamashishini angama-20 anxulumene ne-crypto e-China aqaphele ukuba azakuyeka ukusebenza phakathi kwe-crypto yendawo e-China.
Ukuma kukarhulumente wase-China ngakwicala le-inimical kwishishini le-cryptocurrency ayilulo uphuhliso olutsha, njengoko urhulumente eqinisekisile ukukhumbuza abatyali-mali ngawo onke amathuba. Ekupheleni kukaSeptemba, iBhanki yaBantu yase China (PBoC) yabhengeza ukuba konke ukurhweba kunye nokumbiwa kwemali ye-cryptocurrency kwilizwe laseAsia kwakungekho semthethweni ngaphakathi kwemida yase China. Ibhanki esembindini iyakwalela ukwenziwa kokutshintshiselana nge-crypto kweli lizwe.
Emva kwesi sibhengezo, i-China Securities Journal ityhila ukuba ama-20 amaziko e-crypto aya kumisa yonke imisebenzi kunye neenkonzo e-China kwaye ziye kwelinye ilizwe.
Kwakhona, utshintshiselwano nge-behemoth uHuobi kutshanje ubhengeze ukuba ayisayi kuvumela ukubhaliswa kwabasebenzisi abatsha abavela kummandla. Emva koko, ichibi laseHuobi — elinye lawona madama makhulu emigodi ye-BTC emhlabeni-lahamba ngaphezulu kwe-4 yeebhiliyoni zeedola kwi-BTC kubavukuzi bodwa. Iingxelo zibonisa ukuba le yayiyeyona mali inkulu ukusukela ngoDisemba 2017.
Okwangoku, ichibi lesibini ngobukhulu be-ETH kwihlabathi liphela, iSparkpool, kutshanje ibhengeze ukuba ikunqumamisile ukufikelela kubasebenzisi abatsha e-Mainland China kwaye yashiya zonke iinkonzo zayo kwingingqi ngo-Septemba 30.
Ukwenza izinto zibe mbi nangakumbi, urhulumente wase-China ubambe izixhobo zemigodi ezininzi kunye neendawo kuwo onke amaphondo kwaye uyaqhubeka nokwenza njalo phakathi kokufuduka kwabantu base China.
I-Bitcoin yomelele ngaphandle kwe-China Ban
Oko kwathethileyo, iBitcoin imelane namaza e-FUD kwaye inyuke ngexabiso ngaphandle kokuphindaphindeka kwezenzo ezithintelayo ngurhulumente wase-China. Ngexesha lokushicilela, i-BTC ithengisa ngaphezulu kwe-27% ukusukela kwangoko kwi-PBoC crypto ban.
Kwakhona, umpempe odumileyo uEdward Snowden kutsha nje wathi izithintelo zaseTshayina zenza iBitcoin yomelele ngakumbi.
Ukongeza, uKatie Huan -Umlingane kwiFama yeVenture yeNkampani u-Andreessen Horowitz (a16z) -ubizwe kubalawuli bezemali baseMelika ukwenza uxhamlo kwithuba lokwamkela. Uye waphawula ukuba:
"Eli lithuba le-United States kuba kufanelekile ukuba senze ngokuchaseneyo engqondweni yam kule nto yenziwa yi China."
tags iTshayina, Cryptocurrency, iindaba, IMIMISELO
I-China ye-Ban kwiBitcoin Yenze Yomelela: U-Edward Snowden
Umlobi odumileyo waseMelika u-Edward Snowden wayenamagqabaza amahle ngawo Bitcoin (BTC) kunye nomzi mveliso we-crypto kwi-tweet yamva nje. Owayesakuba ngumcebisi wekhompyuter wobukrelekrele ekhompyutheni wathi:
Ngamanye amaxesha ndicinga ngale nto kwaye ndizibuze ukuba bangaphi abantu abathenga #Bitcoin ngoko.
Kunyukile ~ 10x ukusukela, ngaphandle kwephulo elilungelelanisiweyo lehlabathi ngoorhulumente lokujongela phantsi ukuqonda koluntu-kunye nenkxaso ye-cryptocurrency.
I-China ide yayivala, kodwa iqinise iBitcoin. ”
U-Snowden, odume ngokuvuza amaxwebhu ayimfihlo malunga neenkqubo zokujonga urhulumente wase-US ngobuninzi, eqinisekisa ukuba ukuvalwa kwe-China kutsha nje (eyona nto inzima ukuza kuthi ga ngoku) kuye kwenza iBitcoin yomelela ngakumbi.
Njengoko besitshilo ngaphambili, ireyithi ye-BTC ye-hash irekhode ukubuyisela ngokupheleleyo ukusukela oko kwahamba imigodi ye-crypto evela e-China ebutsheni balo nyaka, eyakhokelela kwingozi yenqanaba le-hash. Ngexesha lokushicilela, eyona mali iphambili yedijithali inyuke yabuyela umva ngaphezulu kwe- $ 50,000.
U-Snowden, ofumene amalungelo okuhlala ngokusisigxina e-Russia kunyaka ophelileyo, wathumela i-tweet malunga nokuthenga i-BTC ngo-Matshi 2020 emva kokubona ingozi ye-50% “Umnyama ngolwesine.” Impempe yatsho ukuba i-cryptocurrency yeflegi ibhale isitshixo esiphindwe kalishumi ukusukela ngoko, nangona kunjalo “Iphulo elilungelelanisiweyo lehlabathi” ukuthintela ukukhula kweekryptos.
"I-Bitcoin ayiphumi ehlathini kodwa": uSnowden
Ngelixa kubonakala ngathi oorhulumente bayiyekile imizamo yabo yokujongela phantsi inkqubela phambili ye-BTC emva kwemizamo engaphumelelanga, uSnowden ulumkisile ukuba "I-crypto ayiphumanga ehlathini okwangoku."
Ukuphendula kumsebenzisi we-Twitter oqaphele oorhulumente beTrust kuphela "Ukulibazisa okungenakuphepheka," impempe eyaziwayo yaqinisekisa ukuba “Ayikapheli de iphele,” Oko kuthetha ukuba oorhulumente banokuthatha isigqibo sokuthintela i-Bitcoin kanye njengokuba besenza ngegolide.
Kwangokunjalo, umphathi wamagqala e-hedge fund u-Ray Dalio kutsha nje uthe ubukho obunokwenzeka bokuba urhulumente agwebe i-BTC kanye njengokuba ibikade ikhuphe igolide.
tags Bitcoin, iTshayina, Edward Snowden, iindaba
I-China inyusa imeko yokuSebenzisa kwe-Yuan yedijithali kuTyalo-mali nakwi-Inshurensi
Iibhanki ezimbini eziphambili ezilawulwa ngurhulumente wase China, ezaziwa njenge China Construction Bank (CCB) kunye neBhanki yezoNxibelelwano (Bocom), ziye zanyanzelisa abahleli ukuba baphuhlise ukusetyenziswa kwamatyala amatsha e-PBoC-ekhutshwe yi-CBDC (imali esembindini yebhanki yedijithali). Amaziko ezemali ngoku asebenzisana nabaphathi bengxowa-mali yotyalo-mali kunye neenkampani zeinshurensi ngokuhambelana neeprojekthi zokulinga ze-yuan yedijithali (e-CNY).
Ngokwengxelo yeSouth China Morning Post (i-SCMP), iibhanki zijolise ekusetyenzisweni kwe-e-yuan ekuthengeni imali yotyalo-mali kunye neemveliso zeinshurensi. Amaziko aqaphele ukuba le yimeko ebalulekileyo yokusebenzisa i-yuan yedijithali "ngaphaya kwexabiso eliphantsi, iintlawulo zemihla ngemihla zentengiso."
Ingxelo yakutshanje ibonise ukuba i-CCB idibene ne-Shanghai Tiantian Fund Distribution ukwenza i-avenue yabasebenzisi be-e-CNY ukulungiselela intlawulo yotyalo mali kwi-Intanethi. Usekela-Mongameli oLawulayo we-CCB uZhang Min uqaphele ukuba:
"Ukususela ngo-2017 sithathe inxaxheba kuphando nakuphuhliso lwemali yedijithali yebhanki, esiyibona ibalulekile kwinkqubo yethu yokuhlawula ngenxa yokukwazi ukuphucula intlawulo."
I-China iyaqhubeka nokuNyusa ukuSasazwa kwe-e-CNY kunye nokuThathwa kwabantwana
Iingxelo zalapha ekhaya zibonisa ukuba i-CCB idale ngaphezulu kwe-8.4 yezigidi zeewallets zedijithali zabantu kunye namashishini ukuza kuthi ga ngoku. Kwakhona, iziko elikhulu lezemali liququzelele ukuthengiselana okungaphezulu kwe-28.5 yezigidi ze-e-CNY (ukusukela ngeJuni), efikelela kwi-18.9 yezigidigidi ze-yuan okanye i-2.9 yezigidigidi zeedola. Kwingcaciso yethutyana yebhanki kwiveki ephelileyo, uSekela-Mongameli oLawulayo waseBocom, uQian Bin, uthe:
"Imali esembindini yase China yibhanki yohlobo lwedijithali luhlobo lwethenda esemthethweni, kwaye ngokwembono yebhanki yezorhwebo, luxanduva lwethu ukuququzelela uphuhliso kunye nokupheliswa kwemali."
Ngenkqubela phambili ebonwe ekwamkelweni kwe-yuan yedijithali, i-China isondela kufutshane kakhulu ekuphuhliseni uluntu olungenamali. Ingxelo ngoJulayi ibonise ukuba uqoqosho lwesibini ngobukhulu lusasaze ngaphezulu kwe- $ 41 yezigidi ze-yuan yedijithali kwimikhankaso yemvulophu ebomvu.
tags Imali ephakathi kwiDigital Bank (CBDC), iTshayina, Yuan yedijithali, iindaba
I-BTCC ishiya iShishini leBitcoin phakathi koRhulumente waseTshayina
I-BTCC, inkampani emva kolunye lotshintshiselwano olukhulu e-Asiya, ibhengeze ukuba iyiphelisile imisebenzi yayo enxulumene ne-cryptocurrency. Inkampani iqaphele ukuba ithengise zonke izabelo zayo kutshintshiselwano lweSingapore iZG.com ngoMeyi 2020. Uninzi lotshintshiselwano ngee-imali yedatha e-China lusabele kwamanye amazwe ngexesha lokuqhekeka kokuqala kwe-crypto kwi-2017.
Nangona kunjalo, urhulumente ubonakala eqinisa ukubambelela kwakhe kwimizi-mveliso ye-crypto ukunqanda ukuphulukana nenkunzi ebotshelelwe kolu shishino. IBhanki yaBantu yase China ibeke amehlo ayo kumashishini angaphezulu kwekhawuntari (i-OTC) kunye neeakhawunti ezinxulumene ne-cryptocurrency. Ngokweengxelo zalapha ekhaya, amashishini e-P2P kunye ne-OTC anomdla aya kuthi iiakhawunti zawo zibe ngumkhenkce. Olu thintelo luya kuchaphazela abathengisi be-cryptocurrency kweli lizwe.
Oko kwathethi, isebe le-BTCC elisebenza eHong Kong likhuphe ingxelo lixela ukuba olo hlaselo aluzukubachaphazela. I-offshoot yatsho ukuba izithintelo e-Mainland China azizukuyigqwetha imali yayo. Inkampani yathi:
"I-BTCC [i-Hong Kong] ayichaphazeleka okwangoku kuba i-BTCC ayiboneleli ngorhwebo lokugcina, kodwa zivela kwii-cryptocurrensets."
I-BTCC ivuselela ukuPhuhliswa kweNkqubo yeBlockchain
I-BTCC ichaze ukuba ingqwalaselo yayo ngoku itshintshele kuphuhliso lwezicelo ezisekwe kwi-blockchain. Urhulumente wase-China uxhasa ngokupheleleyo ukusebenzisa i-blockchain kwaye uyenze enye yezona zinto zigxile kuzo kwinkqubo yakhe yesine yotshintsho kwimizi-mveliso.
Ngelixa ukutshintshiselana nge-cryptocurrency kuphantsi koxinzelelo kurhulumente wase-China, abasebenzi-mgodini banexesha elibi. Kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo, urhulumente uvale izibonelelo ezininzi zemigodi kwaye ukhuphe ukuvalwa kwemigodi kuninzi lwamaphondo akhe amakhulu. Oku kubambeka kuchaphazele inqanaba lomsebenzi wezemigodi wehlabathi, nanjengoko abasebenzi basezimayini befuna iindawo zokufihla intloko kwimimandla ebonakalisa ububele.
Amanye amaphondo akhuphe izilumkiso okanye avalile imisebenzi yezemigodi kubandakanya i-Inner Mongolia, iSichuan neYunan.
Ngenxa yoko, isenzo esingathintelekiyo ngokuchasene nomzi mveliso we-crypto wezemigodi sibe nefuthe elonakalisayo kwinethiwekhi yeBitcoin. I-BTC hashrate ihlale ingahambelani kwiiveki ezithile ngoku. Ngexesha lokushicilela, i-hashrate yeBitcoin ikwi-67.9 EH / s emva kokuwa ngaphezulu kwe-28% ngaphezulu kweeyure ezingama-24 ezidlulileyo. I-Bitcoin hashrate ihle malunga neepesenti ezingama-65 ukusuka kulo lonke ixesha eliphakamileyo le-191 EH / s ngoMeyi.
tags BTCC, iTshayina, Cryptocurrency, iindaba
I-Bitcoin Mining Crack Down e-China: Imiyalelo yeSichuan icinyiwe
Njengoko urhulumente wase-China eqhubeka nokulwa I-Bitcoin yezimbiwa kunye nokusetyenziswa kwemali ye-cryptocurrency kweli lizwe, izityalo zamandla eSichuan zifumene iiodolo zokuyeka ukukhonza abasebenzi basezimayini beBitcoin kulo mmandla. Olu phuhliso lutsha luxelwe ngurhulumente kamasipala wase-Ya'an.
Umntu ongaphakathi uxelele indlu yee-Panews ukuba i-Sichuan Ya'an Energy Bureau kunye ne-Science and Technology Bureau babenentlanganiso yokuxoxa lo mbandela kwaye bafikelela kwisigqibo "Coca kwaye ulungise iinkampani zemigodi e-Ya'an."
U-Panews uxele ukuba zonke iifama zemigodi eSichuan zifumene i-odolo zokuvalwa phambi kwe-25 kaJuni kwaye kubandakanya nokushiya izityalo zamandla ombane.
Intatheli eyaziwayo yaseTshayina yedijithali uColin "Wu" I-blockchain yathatha u-Twitter ukunika ingxelo malunga nophuhliso lwamva nje, eyiphawula loo nto “Nge-18 kaJuni, uSichuan wakhupha uxwebhu olucela iinkampani ezenza umbane kulindeleke ukuba bayeke ukunikezela amandla nakweyiphi na imigodi yemigodi kwaye banike ingxelo ngomhla wama-25.” UWu wongeze loo nto
Olu xwebhu luchonge iiprojekthi ezinkulu ezingama-26 zemigodi kwaye zifuna ukubekw'esweni kwaye zivaliwe. Okwangoku, i-hashrate yeBitcoin kunye ne-Ethereum ayitshintshanga. Zininzi izikhululo zamandla ombane ezincinci naphakathi e-Yunnan, eSichuan, kwaye kunokuba nzima kubo ukuba bafumane ulawulo lukaRhulumente. Nangona kunjalo, iiprojekthi ezinkulu ziya kuvalwa okwethutyana. ”
I-BTC Hashrate Falls njenge-Bitcoin Mining e-China iyanda
Kwezi veki zimbalwa zidlulileyo, amanye amaphondo aliqela e-China akhuphe izaziso zokugxotha iinkampani zemigodi zeBitcoin. Uninzi lweengxelo zamva nje zidibene neZiko laseCambridge lezinye iimephu zesalathiso sezeMali, esithi iipesenti ezingama-65 zenethiwekhi zeBitcoin ziye zavela eChina. Nangona kunjalo, imephu ye-CBECI hashrate imephu ayibonanga luhlaziyo ukusukela ngo-Epreli 2020, ebonisa ukuba iimetrikhi zayo ziphelelwe lixesha.
Okwangoku, i-hashrate yeBitcoin igcine imeko yokudakumba kwezi veki zimbalwa zidlulileyo ngelixa itshintsha ngokungaqhelekanga. Abavukuzi kulo lonke elase China banamava okuxubana kaninzi kumachibi emigodi ngokwe-Bitcoin hashrate distribution.
Ngexesha lokushicilela, i-hashrate ikwi-120 exahash ngomzuzwana (EH / s) kwaye yehle isuka kwi-140 EH / s kwezi yure zili-XNUMX zidlulileyo.
tags Bitcoin Mining, iTshayina, Cryptocurrency, iindaba, Sichuan